ရာသီဥတုခွဲခြားခြင်းစနစ်များသည် ကမ္ဘာ့ ရာသီဥတု ကို ခွဲခြားရန်နည်းလမ်းများ ဖြစ်သည်။ ရာသီဥတုအမျိုးအစားသည် ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာ အမျိုးအစားများနှင့်နီးကပ်စွာ ဆက်နွယ်နေနိုင်သည်၊ ရာသီဥတုသည် ဒေသတစ်ခုအတွင်းရှိ ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုများ အပေါ် အဓိကသက်ရောက်သည်။ လူကြိုက်အများဆုံး ခွဲခြားမှု အစီအစဉ်မှာ ကော့ပန်ရာသီဥတုခွဲခြားမှု အစီအစဉ် ဖြစ်ပါတယ်။ ရာသီဥတုခွဲခြားခြင်းစနစ်များတွင် - အပူချိန်အညွှန်းကိန်း Strahler ရာသီဥတုခွဲခြား Berg ရာသီဥတုခွဲခြား Vahl ရာသီဥတုခွဲခြား Thornthwaite ရာသီဥတုခွဲခြား Trewartha ရာသီဥတုခွဲခြား Alisov ရာသီဥတုခွဲခြား Lauer ရာသီဥတုခွဲခြား Troll ရာသီဥတုခွဲခြား Köppenရာသီဥတုခွဲခြား Holdridge ...
ပတ္တာဆိုသည်မှာ အရာဝတ္ထုနှစ်ခု ချိတ်ဆက်နေပြီး ၎င်းတို့အားလည်ပတ်အောင် ဖန်တီးထားသည့် တံခါးရွက်စသည် တပ်ရာ၌ အသုံးပြုသော သတ္တုပြားလက်ယှက်အား ‌ခေါ်သည်။ သတ္ထုပြားနှစ်ခုသည် သတ်မှတ်ထားသည့် ဝင်ရိုးပေါ်တွင် မျဉ်းဖြောင့်အတိုင်းလည်နေစေပြီး အခြားသို့ ပြောင်းလဲခြင်း သို့မဟုတ် လည်ပတ်ခြင်းအား တားမြစ်ထားသည်။ ထို့ကြောင့်ပင် ပတ္တာသည် လွတ်လပ်ခြင်း ဒီဂရီ ရှိသည့် အရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပတ္တာများကို ကွေးညွှတ်နိုင်သည့် သတ္တုများ သို့မဟုတ် ရွေ့လျားနိုင်သည့်အရာများဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ ဇီဝဗေဒဘာသာရပ်တွင် တံတောင်ဆစ်ကဲ့သို့သော အဆစ်အမြစ်များသည် ပတ္တာ၏အလုပ်လုပ်ပုံနှင့် သဏ္ဌာန်တူသည်။
ဒေါ်လီ သည် အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန် သိုးမလေး တကောင်ဖြစ်သည်။ ဒေါ်လီသည် ဓာတ်ခွဲခန်းအတွင်း အရွယ်ရောက်ပြီးသည့် သိုး၏ သဘာဝအလျောက် မျိုးပွားနိုင်စွမ်းမရှိသော သာမန်ဆဲလ်မှ ပုံတူမျိုးပွားနည်းဖြင့် ပွားယူသည့် ပထမဦးဆုံးသော နို့တိုက်သတ္တဝါဖြစ်သည်။ ဒေါ်လီအား စကော့တလန် ဇီဝဗေဒပညာရှင် အီရန် ဝီမု Ian Wilmut နှင့် ကိသ် ခမ့်ဘဲလ် Keith Campbell တို့မှ မျိုးပွားခဲ့ပြီး ၁၉၉၆ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၅ ရက်နေ့တွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ ဒေါ်လီသည် အသက် ၆ နှစ်အထိ ဓာတ်ခွဲခန်းတွင် နေထိုင်ခဲ့သည်။ သိပ္ပံမဂ္ဂဇင်း Scientific American က ဒေါ်လီအား ကမ္ဘာပေါ်တွင် အကျော်ကြားဆုံး သိုးရယ်လို့ သမုတ်ခဲ့သည်။
ဆဲလ်ဌာနခွဲ ဆိုသည်မှာမိဘ ဆဲလ် ကိုသမီးဆဲလ်နှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက် ပို၍ ခွဲခြားသောလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။ ဆဲလ်ဌာနခွဲကိုများသောအားဖြင့်ပိုကျယ်သော ဆဲလ်သံသရာ တွင်တွေ့ရှိရသည်။ eukaryote s များတွင်ကွဲပြားခြားနားသောဆဲလ်ကွဲပြားခြင်းအမျိုးအစားနှစ်မျိုးရှိသည်။ အသီးအရွက်ခွဲခြားခြင်း၊ သမီးဆဲလ်တစ်ခုစီသည်မိဘဆဲလ် နှင့်မျိုးရိုးဗီဇနှင့်တူညီသောမျိုးပွားခြင်းဆဲလ်များနှင့်မျိုးပွားခြင်းဆဲလ်ဌာနခွဲတို့ဖြစ်သည်။ ဆဲလ်များ၌ ထုတ်လုပ်ရန်တစ်ဝက်လျှော့ချသည်။ ref = ": 0"&gt; တမ်းပလိတ်:ကိုးကားစာအုပ် Meiosis သည်ကွဲပြားမှုနှစ်ခုပါသော DNA ကိုပွားခြင်းတစ်လှည့်ပတ်အားဖြင့် haploid သမီးဆဲလ်လေးခုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ Homologous ခရိုမိုဆု ...
ဇီဝဗေဒဘာသာရပ်ရှိ သက်ရှိ ; တက်ဆွန် ဆိုသည်မှာ အုပ်စုတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ရန် သက်ရှိ သို့ သက်ရှိတစ်ဦး သို့ ထိုထက်ပိုသည့် အုပ်စုတစ်စုဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားခြင်းဟု တက်ဆိုပညာရှင်များကဆိုသည်။ တက်ဆွန် အမည်ပေးခြင်းနှင့် အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ပြုလုပ်ရာတွင် အသုံးပြုလေ့ရှိရာ အထူးသဖြင့် အထက်ပါကိစ္စအပြီးသတ်သွားလျှင် သို့မဟုတ် အပြီးသတ်ပြီးသည့်အခါ လက်ခံအသုံးပြုကြပါသည်။ သို့သော် တက်ဆိုပညာရှင်မျာကြားတွင် တက်ဆွန်နှင့်ပတ်သက်သောအရာများပါဝင်မှုအတွက် အသုံးပြုသောစံနှုန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ကွဲလွဲမှုရှိနေသည်မှာပုံမှန်ဖြစ်သည်။ တက်ဆွန်တစ်မျိုးအားတရားဝင် သိပ္ပံနည်းကျအမည်ပေးရာ၌ အသုံးပြုခြင်းသည် အုပ်စုတစ်စုအတွက်မည်သည့်က သိပ္ပံနည်းကျဖြစ်သည် ...
တမ်းပလိတ်:Infobox Space station မီယာအာကာသစခန်း ရုရှား: Мир, IPA: ; lit. Peace or World သည် ၁၉၈၆ မှ ၂၀၀၁ အထိ ကမ္ဘာပတ်လမ်းကြောင်း အနိမ့်တွင်ရှိခဲ့သော ဆိုဗီယက်နောင်သော်ရုရှားအာကာသစခန်းဖြစ်သည်။ ၁၉၈၆ မှ ၁၉၉၆ထိ ကမ္ဘာပတ်လမ်းကြောင်းပေါ်တွင် တပ်ဆင်ခဲ့သော မီယာအာကာသစခန်းသည် ပထမဆုံး အာကာသစခန်းဖြစ်ပြီး ယခင် အာကာသယာဉ်များထက် အရွယ်ကြီးမားသည်။ ၂၀၀၁ မတ်လ ယင်းအာကာသစခန်းအားကမ္ဘာပတ်လမ်းမှ ဖြုတ်ချခဲ့ချိန်အထိ မီယာအာကာသစခန်းသည် သမိုင်းတွင် အကြီးဆုံးဂြိုဟ်တုကြီးဖြစ်သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် နိုင်ငံတကာအာကာသစခန်းက အကြီးဆုံးစံချိန်သစ် တင်သွားသည်။ မီယာအာကာသစခန်း သည် အာကာသတွင် အမြဲတမ်းနေထိုင်နိုင်ရန် လိုအပ်သော နည်းပညာများ ...
ဆစ်ဂနယ်သခြင်း ဟူသည် အချက်ပြလှိုင်းများ ဆစ်ဂနယ်များ ၏ အချိန်ပြတ် သို့မဟုတ် အချိန်ဆက် လုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် ဝေဖန်သုံးသပ်ချက်များ ဆိုင်ရာ စနစ်အင်ဂျင်နီယာပညာ ၊ လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာပညာ နှင့် အသုံးချသင်္ချာပညာ တစ်မျိုး ဖြစ်သည်။ ယင်းသို့ သခြင်း ပြုလုပ်ရာတွင် သမည့် ဆစ်ဂနယ်သည် အသံဆစ်ဂနယ် ၊ ရုပ်ဆစ်ဂနယ် ၊ အချိန်ပြောင်းတိုင်းတာ တန်ဖိုးများ နှင့် အာရုံခံကိရိယာ မှလာသော အချက်အလက်များ စသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုး ကွဲပြားနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် ဇီဝဗေဒအချက်အလက်များ ဖြစ်ကြသော အီးစီဂျီဆစ်ဂနယ် ၊ ထိန်းချုပ်စနစ်ဆစ်ဂနယ် ၊ ဆက်သွယ်ရေးဆစ်ဂနယ် စသည်တို့သည် ဆစ်ဂနယ်များ ဖြစ်ကြသည်။ စင်စစ်အားဖြင့် ဆစ်ဂနယ်များသည် အချိန်ပြောင်း သို့ ...
ပလန့်တန် သည် ရေထဲတွင်ရှိသော မတူကွဲပြားသည့် သက်ရှိအစုအဝေးဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့သည်ရေစီးကြောင်းကိုဆန့်ကျင့်၍ကူးနိုင်စွမ်းရှိသည်။ plankton ဖွဲ့စည်းထားသောသက်ရှိများကို plankters ဟုခေါ်သည်။ ၎င်းတို့သည်သေးငယ်သောကြီးမားသောရေနေသက်ရှိများဖြစ်သည့် အခွံမာရေသတ္တဝါ သို့မဟုတ် ရေတွင်ကူးခတ်သွားလာသောရေသတ္တဝါ nekton အစရှိသည်တို့ပါဝင်ခြင်းမရှိပါ။ Plankton ကိုလည်းအရွယ်အစား၏စည်းကမ်းချက်များ၌ဖော်ပြလေ့ရှိသည်။ များသောအားဖြင့်အောက်ပါကွဲပြားမှုများကိုအသုံးပြုသည်။
ယဉ်ပါးအောင်မွေးမြူခြင်း ဆိုသည်မှာ သတ္တဝါတစ်စု၏ မျိုးပွားနိုင်စွမ်းနှင့် ပြုစုစောင့်ရှောက်ခံရမှုအပေါ် လွှမ်းမိုးထိန်းချုပ်ခြင်းဖြင့် ထိုသတ္တဝါတစ်စုထံမှ လိုအပ်သောအရည်အချင်းများအား ရရှိလာနိုင်စေရန် မျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်ပြုပြင်ရယူခြင်းဖြစ်သည်။ ချားလ်စ် ဒါဝင် သည် ယဉ်ပါးပြီးဖြစ်သောမျိုးစိတ်များနှင့် ၎င်းတို့နှင့် အမျိုးတူတောရိုင်းမျိုးစိတ်များကို ကွဲပြားခြားနားစေသည့် သွင်ပြင်လက္ခဏာအချို့ကို သတိပြုမိခဲ့သည်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် Selective Breeding ဟုခေါ်သည့် မျိုးစိတ်တစ်ခု၏ နှစ်လိုဖွယ်သွင်ပြင်လက္ခဏာများကို လူသားတို့မှတိုက်ရိုက်ရွေးချယ်ယဉ်ပါးစေခြင်းနှင့် သဘာဝတရား၏ရွေးချယ်မှုအရ သွင်ပြင်လက္ခဏာများ ဆ ...
လောရင့်မာ့ခ်ဆန်ဂါ သည် အမေရိကန်လူမျိုးအင်တာနက်စီမံကိန်းထုတ်လုပ်ဖန်တီးသူ၊ ဝီကီပီးဒီးယားကို တွဲဖက်တည်ထောင်သူနှင့် Citizendium ကို တည်ထောင်သူတစ်ဦး ဖြစ်သည်။ သူသည် အလက်စကာပြည်နယ်၊ အန်ချောရိတ် တွင် ကြီးပြင်းခဲ့သည်။ ဘဝအစောပိုင်းကာလများတွင် ဆန်ဂါသည် ဒဿနိကဗေဒကို စိတ်ပါဝင်စားခဲ့သည်။ ၁၉၉၁ ခုနှစ်တွင် ရိဒ်ကောလိပ်မှ ဒဿနိကဗေဒဖြင့် ဘွဲ့ရခဲ့သည်။ ၂၀၀၀ ခုနှစ်တွင် Ohio State University တွင် ဒဿနိကဗေဒဖြင့် ဒေါက်တာတစ်ဦး ဖြစ်လာခဲ့သည်။ သူ၏ အတွေးအခေါ် အများစုသည် ဗဟုသုတသီအိုရီဖြစ်သည့် epistemology ကို အခြေခံထားသည်။ လာရီဆန်ဂါသည် အမျိုးမျိုးသော အွန်လိုင်းစွယ်စုံကျမ်းစီမံကိန်းများတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ သူသည် နျူပီးဒ ...
ဇီဝအသက် ဆိုသည်မှာ မည်သည့်အရာဖြစ်သည်ဟူ၍ ကား တိကျစွာမပြောနိုင်ချေ။ သို့ရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့ အကြား အမြင် အတွေ့အကြုံတို့ကို အခြေပြု၍ ပြောရသော်၊ ဇီဝ အသက်ဟူသည် သဇီဝခန္ဓာကိုယ်ကို ဖွဲ့စည်းထားသောအရာ များနှင့် အစဉ်သဖြင့် ဆက်စပ်နေသည်။ ဇီဝကင်းမဲ့သော ရုပ်ကို အနှံ့အပြား များစွာတွေ့နိုင်သော်လည်း၊ ရုပ်ကင်းမဲ့သော ဇီဝကို မူ သိပ္ပံလောကတွင် ရှာ၍မတွေ့ချေ။ ထိုကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ နား လည်သော ဇီဝဆိုသည်မှာ ရုပ်နှင့် ခွဲခွာ၍မရအောင် ဆက်စပ် လျက်ရှိသောအရာဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့စွမ်းဆောင်နိုင်သမျှ ဇီဝ၏ အဓိပ္ပါယ်ဖော်ပြရသော်၊ အပင်နှင့် တိရစ္ဆာန်တို့တွင် တွေ့မြင်ရသော လုပ်ငန်းဆောင်တာတို့ကို ချုပ်ကိုင်ထားသော အရာမှာ ဇီဝဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် ရွေ့ရှားခြင်း၊ ကြီးခြင်း၊ မျိုးပွားခြင်း စသည့် အခြင်းအရာများသည် သဇီဝတို့ အသက် ရှင်စဉ် တွေ့မြင်ရသည့် လက္ခဏာများပင် ဖြစ်လင့်ကစား၊ ယင်း လက္ခဏာတို့ပေါ်တွင် မူတည်၍ အကြွင်းမဲ့ပြည့်စုံသော ဇီဝ၏ အဓိပ္ပါယ်ကို မပေးနိုင်သေးချေ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၊ ယင်း လက္ခဏာ တစ်စိတ်တစ်ဒေသကို နိဇီဝ သက်မဲ့များတွင်လည်း တွေ့မြင်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သာဓကအဖြစ် ပြရသော်၊ မြစ်များလည်း ကြီးထွားခြင်းရှိကြ၏။ မြစ်မမှ မြစ်ငယ်များထပ် ပွားနိုင်ကြသည်။ ပရုတ်စိမ်းကို ရေမျက်နှာပြင်ပေါ်၌ တင်ကြည့် လျှင် ဟိုဟိုသည်သည် လှုပ်ရှားကြောင်း တွေ့ရသည်။ ရွံ့စေးကို လည်း ရေနှင့်ဖျော်ကြည့်လျှင် ရွံ့စေးမှုန့်များ လှုပ်ရှားကြောင်းကို တွေ့ရသည်။ သို့ရာတွင် ဇီဝကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သော အခြင်းအရာ များကို သေချာစွာစိစစ်၍ လေ့လာသော်၊ အောက်ပါဝိသေသ လက္ခဏာကြီးငါးချက်ကို တွေ့ရပေမည်။
1.1. ဇီဝဗေဒ ၁။ ပရိုတိုပလက်ဇမ်ခေါ် မူလဩဇာ
1.2. ဇီဝဗေဒ ၂။ မျိုးပွားခြင်း
1.3. ဇီဝဗေဒ ၃။ ရွေ့လျားခြင်း
သဇီဝတို့တွင် အသက်ရှင်နေသောအဖြစ်ကို ပြသော လက္ခဏာကား ရွေ့ရှားနိုင်သော သတ္တိဖြစ်သည်ဟု ယူဆနိုင် သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့ တွေ့မြင်နေကြရသော သစ်ပင်တို့မှာ မြေ၌ စွဲမြဲနေကြသည့် အရာများဖြစ်ကြသောကြောင့် တိရစ္ဆာန်များမှာ ကဲ့သို့ ရွေ့ရှားနိုင်သော သတ္တိကို ထင်ထင်ရှားရှားအမြဲတမ်း မတွေ့ရချေ။ အပင်နှင့် တိရစ္ဆာန်တို့၏ ရွေ့လျားခြင်းကို နှစ်မျိုး ခွဲခြားနိုင်သည်။ ယင်းတို့မှာ က အလိုအလျှောက် ရွေ့လျားခြင်း နှင့် ခ ဆွဲဆောင်၍ ရွေ့လျားခြင်း သို့မဟုတ် တုံ့ပြန်သတ္တိတို့ ဖြစ်ကြသည်။
က အလိုအလျောက် ရွေ့လျားခြင်းကို တိရစ္ဆာန်တို့တွင်
ခ သဇီဝတို့တွင် ဆွဲဆောင်၍ ရွေ့ရှားခြင်း သို့မဟုတ်
1.4. ဇီဝဗေဒ ၄။ ဇီဝရုပ်အဖြစ်အပျက်
သဇီဝမှန်သမျှတွင် ဇီဝရုပ်အဖြစ်အပျက် မက်တာဗော်လစ် ဇင် ပြုပြင်နိုင်စွမ်းရှိသည်။ မက်တာဗောလ်လစ် ဇင်ဆိုသည်မှာ ဇီဝကိစ္စဗေဒ ဖီဇီဩလိုဂျီ လုပ်ငန်းဆောင်တာနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သဇီဝတို့၏ဆဲအတွင်း၌ ဓာတ်များအဆက်မပြတ် ပြုပြင်ပြောင်း လဲနေပုံကို ခြုံ၍ခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။ မက်တာဗော်လစ်ဇင်ကြောင့် ရရှိသော အကျိုးကျေးဇူတို့မှာ သဇီဝတို့၏ အသက်ရှင်ရေးဖြစ် သော ပရိုတိုမလက်ဇမ်များ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း၊ မချွတ်ယွင်းအောင် ဖန်တီးခြင်းနှင့် ချွတ်ယွင်းသွားသော ပရိုတိုပလက်ဇမ်များကို အသစ်ဖြစ်အောင် တစ်ဖန်ပြုပြင်နိုင်ခြင်း တို့ဖြစ်ကြသည်။ သဇီဝကို အသုံးပြုရန်အတွက် ဩဂဲနစ်ပစ္စည်းပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ဆိုင်သော မတ်တာဗော်လစ်ဇင် ကို ဇီဝရုပ်ဖြစ်ခြင်း အနာဗော် လစ်ဇင်ဟု ခေါ်သည်။ သဇီဝတို့ စွမ်းအင်ရမှုအတွက်ပြုလုပ်ပြီး ဩဂဲနစ် ပစ္စည်းများကို ချေဖျက်ခြင်းနှင့်၎င်း၊ အသုံးမကျသော ပစ္စည်းများကို ဖျက်ဆီးခြင်းနှင့်၎င်း ဆိုင်သော မက်တာဗော်လစ် ဇင်ကိုမူ ဇီဝရုပ်ပျက်ခြင်း ကက်တာဗော်လစ်ဇင်ဟု ခေါ်သည်။
1.5. ဇီဝဗေဒ ၅။ ကြီးထွားခြင်း
ဇီဝဗေဒတွင် သုံးစွဲသော ကြီးထွားခြင်းဆိုသော ဝေါဟာရသည် အရွယ်ပမာဏကြီးမားလာခြင်းထက် ပိုမိုနက်နဲသော အဓိပ္ပါယ်ကို ဆောင်သည်။ ဤဝေါဟာရကို သုံးလိုက်သည်နှင်တစ်ပြိုင်နက် မက်တာဗော်လစ်ဇင်၏ အကျိုးကြောင့် က မိတိုဆစ် သို့မဟုတ် ဒွိဂုဏ်ပွားခြင်းဖြင့် ဆဲအသစ်များဖြစ်ပေါ်ခြင်း၊ ခ ထိုဆဲအသစ်များ ပမာဏကြီးမားလာခြင်းနှင့် ဂ ယင်းကဲ့သို့ ကြီးမားလာသောဆဲများ ကြီးရင့်လာပြီးလျှင် ရင့်သောတစ်ရှူး အသီးသီးအဖြစ်သို့ ရောက်လာခြင်းတည်းဟူသော အဆင့်သုံး ဆင့် တစ်ဆက်တည်း ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းကို သိနားလည်ထားရ မည်။ ပမာဏကြီးမားခြင်းသည် ကြီးခြင်း၏အဆင့် တစ်ဆင့်မျှ သာဖြစ်သည်။ ဖီဇီဩလိုဂျီဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ခွဲဝေ ခြင်း၊ ယင်းတာဝန်အသီးသီးကို ညီညွတ်စွာဖြစ်စေရန် ညှိထိန်း ၍ပေးခြင်း၊ သဇီဝ၏ မျိုးရိုးရုပ်သွင်ပေါ်အောင် ဖွံဖြိုးခြင်းတို့ သည်လည်း ကြီးထွားခြင်းဆိုသော ဝေါဟာရ၌ အကျုံးဝင်ပြီးဖြစ်ကြ သည်။ အချုပ်ကိုရှင်းလင်းစွာဆိုရသော်၊ သဇီဝတို့၏ ကြီးထွားခြင်း သည် အတွင်းဖက်ရှိ ပရိုတိုပလက်ဇမ်ကို အရင်းခံ၍ စတင်ဖြစ် ပေါ်သည်။ နိဇီဝတို့၏ ကြီးမားခြင်းမှာ ပြင်ပ၌စတင်ဖြစ်ပေါ် သည်။ ပုံဆောင်ခဲများ ကြီးမားလာပုံကို သာဓကပြုရလျှင်၊ ရုပ်တူဓာတ်တူဖြစ်ကြသော မော်လီကျူးများသည် ပုံဆောင်ခဲ၏ ပြင်ပမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ထပ်တလဲလဲ စွဲကပ်သောကြောင့် ပမာဏကြီးလာခြင်းဖြစ်သည်။
2. ဇီဝဗေဒကို လေ့လာနည်း
2.1. ဇီဝဗေဒကို လေ့လာနည်း ၁။ သေချာပါစေ၊ တိကျပါစေ။
2.2. ဇီဝဗေဒကို လေ့လာနည်း ၃။ ရှင်းလင်းစွာ တွေးနိုင်ပါစေ။
2.3. ဇီဝဗေဒကို လေ့လာနည်း ၄။ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ဆန်းစစ်နိုင်ပါစေ။
အီဗော်လျူရှင်ဩဝါဒအရ တိုးတက်သော ဝါ အမြင့် တန်းစား သဇီဝနှင့် ရှေးကျသော ဝါ အနိမ့်တန်းစား သဇီဝ ဟူ၍ ခွဲခြားထားသည်။ အမြင့်တန်းစားသဇီဝသည် အနိမ့်တန်း စား သဇီဝမှ စနစ်တကျပြောင်းလဲ တိုးတက်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ယူဆသည်။ အမြင့်တန်းစားသဇီဝ၏ အင်္ဂါဖွဲ့စည်း ပုံမှာ အနိမ့်တန်း စားသဇီဝ၏ အင်္ဂါဖွဲ့စည်းပုံထက် ပိုမိုရှုပ်ထွေး ဆန်းကြယ်သည်။ အနိမ့်တန်းစားသဇီဝ၏ အင်္ဂါဖွဲ့စည်းပုံမှာ ရှုပ်ထွေးဆန်းကြယ်ခြင်းမရှိ၊ ရှင်းလင်းသော အခြေခံရုပ်အသွင် မျိုးဖြစ်သည်။
3.1. အပင်နှင့်တိရစ္ဆာန် အပင်နှင့်တိရစ္ဆာန်တို့၏ ကွာခြားချက်
အကိုင်း ကြီးများမှ ပင်စည်မကြီးအထိ လျှောဆင်း၍ကြည့်သော်၊ အတိတ်ခေတ်တွင် ရှေးကျသော ဝါ အနိမ့်တန်းစားအပင်နှင့်တိရစ္ဆာန် သို့မဟုတ် အပင်လော တိရစ္ဆာန် လောဟု ခွဲခြား၍မရသောအရာကို တွေ့မည်။ အထူးသဖြင့် ဆဲ တစ်ခုတည်းသာ ပါရှိသည့် အနိမ့်တန်းစား အပင်နှင့် တိရစ္ဆာန် ကို ခွဲခြား၍သိရန်မှာ အခက်ဆုံးဖြစ်သည်။ ရုက္ခဗေဒပညာရှင် တို့က အပင်ဟုမှတ်ယူထားသော အပင်တိရစ္ဆာန် သဇီဝများ ယခုခေတ်တိုင်အောင်ပင် ရှိနေကြသည်။ ပုံစံ-ယူဂလီနာ။ ထိုသို့ဖြစ်ခြင်းကြောင့် အပင်နှင့် တိရစ္ဆာန်တို့ကို ခွဲခြားရာတွင် စည်းမျဉ်းကို လှေနံဓားထစ်ချထား၍မရချေ။ ယေဘုယျအားဖြင့် အောက်ပါထူးခြားချက်များနှင့် ခြွင်းချက်များကို ထောက်ထား လျက် သစ်ပင်နှင့် တိရစ္ဆာန်ကို ခွဲခြား၍သိရသည်။
၁။ ကြီးခြင်း အပင်တွင် ကြီးရာအပိုင်း ဝါ ကြီးနယ်များသည် သူ့ နေရာနှင့်သူ တိကျစွာသတ်မှတ်လျက်ရှိသည်။ မျာသောအားဖြင့် ပင်စည် ထိပ်ဖျားနှင့် အမြစ် ထိပ်ဖျားတို့သည် ကြီးနယ်များဖြစ် ကြသည်။ အစေ့ရွက်ထီးပင်Monocotနှင့် အချို့သောအပင်မျိုးတို့တွင် ကြီး နယ်များသည် ဆစ်ကြား၊ ဆစ်ကြားရင်းနှင့် ရွက်ရင်းတို့၌ ရှိ တတ်ကြသည်။ တိရစ္ဆာန်တို့ကား သစ်ပင်ကဲ့သို့မဟုတ်ချေ။ တိရစ္ဆာန်တို့၏ အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတို့သည် ထက်ဝန်းကျင် တစ်ပြိုင်နက် ကြီးနိုင်သည်။ သို့ရာတွင် ထိုကြီးနိုင်သည့်စွမ်း ရည်သည် တိရစ္ဆာန်တို့ အရွယ်ရောက်သည်အထိသာ ဖြစ်သည်။ အရွယ်ရောက်ပြီး နောက်အဖို့၌ကား ကြီးမှုနောက်ထပ်မဖြစ် တော့ချေ။ အပင်တို့မူကား တစ်သက်လုံး ကြီးနိုင်စွမ်းရှိသည်။
၂။ ကလိုရိုဖီ အကျိုးဖျက် ကပ္ပါးပင်နှင့် ဖန်းဂပ်မှိုပင်တို့မှလွဲ၍ အစိမ်း ရောင်သန်းလျက်ရှိသော အပင်မှန်သမျှတွင် ကလိုရိုဖီပါဝင်လေ သည်။ ယင်းသို့ ကလိုရိုဖီ ပါရှိခြင်းကြောင့် အပင်သည် အလို အလျောက် အစာလုပ်နိုင်လေသည်။ တိရစ္ဆာန်တို့တွင်မူကား ကလိုရိုဖီ မရှိကြချေ။ ထိုကြောင့် အလိုအလျောက် အစာလုပ် နိုင်စွမ်းမရှိချေ။ ခြွင်းချက်။ ။ကလိုရိုဖီ မပါသော ဖန်းဂပ် မှိုနှင့် ဗက်တီးရီးယားတို့သည်လည်း တိရစ္ဆာန်များကဲ့သို့ပင် အလိုအလျောက် အစာလုပ်နိုင်စွမ်း မရှိကြချေ။
၃။ ဆဲနံရံ သဇီဝမှန်သမျှတို့၏ ခန္ဓာကိုယ်သည် သေးငယ်သော ဆဲ များဖြင့် ပြည့်နှက်နေသည်။ ဆဲတို့ကို ပတ်လည်ကာရံထားသော ဆဲနံရံကိုမူကား အပင်၌သာ ထင်ရှားတွေ့မြင်ရသည်။ တိရစ္ဆာန် တို့၏ ဆဲ၌ နံရံကင်းမဲ့သည်။ ခြွင်းချက်။ ။ချွဲကျိမှိုတွင် ဆဲ နံရံမပါချေ။
၄။ ဆဲလျူလို့ ဖန်းဂပ်မှိုမှတစ်ပါး အားလုံးသော အပင်တို့၏ ဆဲနံရံတို့ သည် ဆဲလျူလို့ဖြင့်ပြီးသည်။ တိရစ္ဆာန်တို့၏ ဆဲနံရံတွင်မူ ဆဲ လျူလို့မပါချေ။ ခြွင်းချက်။ ။ကျူနီကိတ် တိရစ္ဆာန်၏ ဆဲနံရံ သည်လည်း ဆဲလျူလို့ဖြင့်ပြီးသည်။
၆။ ရုပ်တည်ဩဇာစုခြင်း တိရစ္ဆာန်တို့သည် အစိုင်အခဲဖြစ်သော အစာများကို စားမြို နိုင်ကြလေသည်။ အပင်တို့မှာမူကား ယင်းတို့၏ ပြင်ပပတ်ဝန်း ကျင်၌ ပျော်ဝင်လျက်ရှိသော အရည်များကိုသာ အခြေအနေအရ စုပ်ယူနိုင်စွမ်းရှိကြလေသည်။ ခြွင်းချက်။ ။ချွဲကျိမှိုသည် သေးငယ်သော အစာအစိုင်အခဲများကို မြိုနိုင်၏။
4. ဇီဝဗေဒမှ ဖြာထွက်သော ခက်မများ
ဇီဝဗေဒမှ အဓိကအားဖြင့် ရုက္ခဗေဒနှင့် ပါဏဗေဒသတ္တဗေဒဟူ၍ ခက်မနှစ်သွယ်ခွဲထွက်သည်။
4.1. ဇီဝဗေဒမှ ဖြာထွက်သော ခက်မများ ၁။ ရုပ်သွင်ပညာ
4.2. ဇီဝဗေဒမှ ဖြာထွက်သော ခက်မများ ၂။ တစ်ရှူးပညာ
4.3. ဇီဝဗေဒမှ ဖြာထွက်သော ခက်မများ ၃။ ဇီဝကမ္မဗေဒ
4.4. ဇီဝဗေဒမှ ဖြာထွက်သော ခက်မများ ၅။ အပင် သို့မဟုတ် သတ္တဝါပထဝီ
4.5. ဇီဝဗေဒမှ ဖြာထွက်သော ခက်မများ ၆။ အမျိုးအစားခွဲနည်းပညာ
ဤပညာသည် အပင်နှင့် တိရစ္ဆာန်တို့၏ ရုပ်အသွင်ကို အသေးစိတ်လေ့လာ၍ ရုပ်လုံးဖော်ခြင်း၊ မျိုးမည်သတ်မှတ်ခြင်း နှင့် စနစ်တကျ အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်းတို့ကို ပြုသောပညာ ဖြစ်သည်။ ထိုပညာကို အစပြုခဲ့သူကား ဆွီဒင်လူမျိုး ဇီဝဗေဒပညာရှင် ကားလ် လင်းနီးယပ် ဖြစ်၏။ ခေတ်သစ်ရုက္ခဗေဒပညာရှင်တို့ တွေ့ရှိလေ့လာမှတ်သားထား သော အပင်မျိုးစိတ်ပေါင်းမှာ သုံးသိန်းနှစ်သောင်းမျှရှိသည်။ သတ္တဗေဒပညာရှင်တို့ လေ့လာပြီးသော တိရစ္ဆာန်မျိုးစိတ်ပေါင်း ထက် အရေအတွက်အားဖြင့် သုံးဆပိုမိုလျက်ရှိသည်။ တော တောင်အထပ်ထပ်နှင့် တကွ လူသူအရောက်အပေါက်မရှိသေး သော ဝါ လူနေနည်းပါးသော အရပ်ရပ်တို့၌ ပေါက်နေသည့် အပင်တို့ကို ရှာဖွေလေ့လာနိုင်လျှင် အပင်မျိုးစိတ်အရေအတွက် ပိုမိုများပြားစွာ တွေ့ရှိဦး မည်မှာ သေချာပေသည်။
4.6. ဇီဝဗေဒမှ ဖြာထွက်သော ခက်မများ ၇။ ရုပ်ကြွင်းကျောက် ရုက္ခဗေဒနှင့် ရုပ်ကြွင်းကျောက်ပါဏဗေဒ
အတိတ်ခေတ်၌ ပေါ်ထွန်းခဲ့ကြသော အပင်နှင့် တိရစ္ဆာန်တို့ ၏ ရုပ်ကြွင်းများသည် မြေလွှာအထပ်ထပ်၌ ကျောက်ဖြစ်၍ ကျန်ရစ်နေတတ်ကြသည်။ ထိုရုပ်ကြွင်းကျောက်တို့၏ အသွင် လက္ခဏာကို စူးစမ်းလေ့လာခြင်းဖြင့် အတိတ်ခေတ်တွင် ပေါ် ထွန်းခဲ့ကြသော အပင်နှင့် တိရစ္ဆာန်တို့အကြောင်းကိုသိနိုင်သည်။ အပင်နှင့် တိရစ္ဆာန်များ၏ ရုပ်ကြွင်းကျောက်ကို ယခုခေတ်၌ တွေ့မြင်နေကြရသော အပင်၊ တိရစ္ဆာန်တို့နှင့် နှိုင်း၍လည်း လေ့လာနိုင်သည်။ အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်းသည် ဇီဝဗေဒပညာရပ်တွင် အလွန် အသုံးဝင်သည်။ ဇီဝဗေဒပညာရှင်တို့သည် တိရစ္ဆာန်များကို ၁ ကျောရိုးရှိတိရစ္ဆာန်နှင့် ၂ ကျောရိုးမဲ့တိရစ္ဆာန်ဟု နှစ်မျိုးခွဲခြား သည်။ ထိုအစု နှစ်ခုကို တစ်ဖန်အောက်ပါအတိုင်း ခွဲခြားပြန် သည်။
4.7. ဇီဝဗေဒမှ ဖြာထွက်သော ခက်မများ ၁။ ။ကျောရိုးရှိတိရစ္ဆာန်
ဃ ငှက်။ ပုံစံ-လင်းယုန်ငှက်၊ သိန်း၊ ငှက်ခါး၊ စာကလေး၊ ခို၊ ကြက်၊ ချိုး၊ ဥဩ။
ဂ တွားသွားကောင်။ ပုံစံ-မြွေ၊ ပုတ်သင်၊ ဖွတ်၊ ပုတက်၊ လိပ်။
က ငါး။ ပုံစံ-ငရှဉ့်၊ ငရံ့၊ ငမန်း။
ခ ကုန်းနေရေသတ္တဝါ။ ပုံစံ-ဖား၊ နျူကောင်။
င နို့တိုက်သတ္တဝါ။ ပုံစံ-မျောက်၊ နွား၊ မြင်း၊ ခွေး၊ သိုး၊ ဆိတ်၊ လူ၊ ကျွဲ၊ ​ကြောင်၊ ဝက်၊ ယုန်။
4.8. ဇီဝဗေဒမှ ဖြာထွက်သော ခက်မများ ၂။ ။ကျောရိုးမဲ့တိရစ္ဆာန်
ခ မိုလတ်စကာ။ ပုံစံ-ကမာ၊ ခရု။
ဂ အန်နလစ်ဒါ။ ပုံစံ-တီကောင်၊ မြှော့။
က အားသရော့ပိုဒါ။ ပုံစံ-အင်းဆက်ပိုး၊ ပင့်ကူ။
ဃ ပရိုတိုဇိုဝါ။ ပုံစံ-အမီးဗားဝမ်းကိုက်ပိုး၊
ဇီဝဗေဒပညာရှင်တို့သည် အပင်များကို အပွင့်ပွင့်သော အပင်နှင့် အပွင့်မပွင့်သော အပင်ဟူ၍ အစုကြီး နှစ်စုခွဲထား သည်။ တစ်ဖန် အပွင့်ပွင့်သော အပင်များကို က အန်ဂျီအို စပမ်းခေါ် မျိုးစေ့ဝှက်ပင်မျိုး၊ ပုံစံ-သရက်၊ ဩဇာ၊ မာလကာ နှင့် ခ ဂျင်မနိုစပမ်းခေါ် မျိုးစေ့ဖော်ပင်မျိုး၊ ပုံစံ-ထင်းရှူး၊ ဖားထင်းရှူးဟူ၍ ခွဲခြားထားပြန်သည်။ အပွင့်မပွင့်သော အပင်များမှာမူ ကျောက်ချက်ပင်မျိုး၊ ရေည|ိ၊ လစ်ဗာဝတ်ပင်၊ ဖန်ဂျိုင်း၊ မှို၊ အယ်လဂျေပင် ကျောက် ပွင့်တို့ ဖြစ်ကြသည်။
4.9. ဇီဝဗေဒမှ ဖြာထွက်သော ခက်မများ ဇီဝဗေဒပညာသမိုင်း
ဘီစီ ၆ဝဝ အထက်က ဂရိပညာရှိ အနက်ဆီမန်ဒါသည် တိရစ္ဆာန်တို့မှာ ရေမှဖြစ်ပေါ်လာ၏ဟူသော အယူအဆကို ကြံ ဆခဲ့ဘူး၏။ ထိုနောက် နှစ်ပေါင်းတရာခန့်ကြာသောအခါ၊ ဆေး ပညာ၏ ဖခင်ဟု ခေါ်ဆိုသမုတ်အပ်သော ဂရိပညာရှိ ဟစ်ပေါ့ ကရာတီသည် ဇီဝဗေဒပညာကို များစွာအထောက်အပံ့ပြုခဲ့သည်။ ဂရိလူမျိုး အယ်ရစ္စတိုတယ်နှင့် ရောမလူမျိုး ပလင်နီတို့သည် သတ္တဝါနှင့် အပင်အကြောင်းကို များစွာ သုတေသနပြုခဲ့ကြ သည်။
ခရစ် ၁၇ဝဝ ပြည့်နှစ်အတွင်း၌ ဆွီဒင်အမျိုးသား သိပ္ပံ ပညာရှင် လင်းနီးယပ်သည် အပင်နှင့် တိရစ္ဆာန်တို့ကို သိပ္ပံပညာ နည်းစနစ်ဖြင့်လျော်ညီအောင် အမျိုးအစားခွဲခြား၍ ပေးခဲ့လေ သည်။ ထိုပြင်၊ ပြင်သစ်အမျိုးသား ကူးဗီယေသည် လူနှင့် တိရစ္ဆာန်တို့၏ ကိုယ်ခန္ဓာဖွဲ့စည်းပုံကို လေ့လာ၍ အနာတမီ ပညာရပ်ကို စတင်ပြုစုပေး ခဲ့လေသည်။ ခရစ် ၁၈ဝဝ ပြည့်နှစ် ၌ ရှလိုင်ဒင်နှင့် ရှဗန်းနှစ်ဦးတို့သည် သက်ရှိရုပ်ဟူသမျှမှာ ဆဲ များဖြင့်သာ ဖွဲ့စည်းထားကြောင်း သီအိုရီကို ကြံဆခဲ့ကြလေ သည်။ ထိုခေတ်တွင် ဒါဝင်သည် ဝေါလေ့နှင့်အတူ သုတေသန ပြုရာမှ ယခုအခါ အလွန်ကျော်စောထင်ရှားသော အီဗော်လျူရှင် ဆိုင်ရာ သီအိုရီတစ်ခုကို ကြံဆခဲ့လေသည်။ ယင်းသီအိုရီမှာ တိရစ္ဆာန်တို့သည် အနိမ့်တန်းစားတိရစ္ဆာန်မျိုးမှ တစ်ဆင့်ထက် တစ်ဆင့်တက်၍ အမြင့်တန်းစား တိရစ္ဆာန်မျိုးအဖြစ်သို့ ကူး ပြောင်းလာတတ်သည်ဟူသော အခြေခံသဘောတရားပင်ဖြစ်လေ သည်။ ဩစတြီးယား လူမျိုး ခရစ်ယန်ဘုန်းတော်ကြီး မင်းဒဲ မှာမူ ဂျင်နစ်တစ်ပညာရပ်ဆိုင်ရာ အခြေခံနိယာမတရားတို့ကို ရှာဖွေတွေ့ ရှိခဲ့လေသည်။ ၂ဝ ရာစု နှစ်ဦးတွင် ဂျာမန်လူမျိုး ဇီဝဗေဒပညာရှင် ဗိုက်စမန်းသည် တိရစ္ဆာန်တို့၏ ဗီဇဆဲများကို အခြားဆဲများမှ ခွဲခြား၍ ပြဆိုခဲ့လေသည်။ ထိုပြင် လူဝီပါး စတားနှင့် ရောဗတ်ကော့တို့သည် ဗက်တီးရီး ယားပိုးပညာကို ထွန်းကားလာအောင် အထောက်အပံ့ပြုခဲ့လေ၏။ ဦးကိုကိုကြီး
ရှေးခေတ်ဂရိပညာရှင်များလက်ထက်မှ အစပြု၍ လူ၊တိရစ္ဆာန်နှင့် အပင်များအား သုတေသနပြုခဲ့ကြောင်း သမိုင်းအထောက် အထား များရှိခဲ့သည်။ ၈ရာစုနှင့်၁၃ရာစုကာလ အာရပ်လူမျိုးပညာရှင်များ၏ ရှာဖွေတွေ့ရှိချက်များနှင့် ဥရောပရီနေဆွန်းခေတ် လေ့လာစမ်းသပ် ချက်များစွာတို့သည် ခေတ်သစ် ဇီဝဗေဒပေါ်ထွန်းစေသည့်အခြေခံ အုတ်မြစ်များဖြစ်ခဲ့သည်။ ၁၇ ရာစုတွင် အဏုကြည့်မှန်ဘီလူး ပေါ်ပေါက်လာပြီးနောက် ရောဂါပိုးမွှားများMicrobes၊ဆဲလ် Cellအစရှိသည့် ကြီးမားသည့် တွေ့ရှိ ချက်များ ပေါ်ထွန်းခဲ့ပြီး ၁၈ရာစု ခေတ်သစ်ဓါတုဗေဒနှင့် စနစ်တကျပေါင်းစပ်ကာ ယနေ့ကျွနု်ပ်တို့ သိရှိမြင်တွေ့နေ ရသည့်ခေတ်သစ်ဇီဝဗေဒ ပေါ်ထွန်းလာခဲ့သည်။
ထို့အပြင်ခေတ်သစ်ဇီဝဗေဒသည် လူ့အဖွဲ့အစည်း၏နေ့စဉ်ဘဝတွင် မရှိအဖြစ်အသုံးပြုရသော အရေးပါသည့်ဘာသာရပ်တစ်ခု လည်းဖြစ်သည်။သာဓက များပြရသော မျိုးရိုးဗီဇနှင့်ဆဲလ်များ အားအထူးပြုလေ့လာသည့် Geneticsနှင့်Cell Biologyတို့၏အကျိုး ကျေးဇူးကြောင့် ပိုမိုတိုးတက်သည့်ဆေးဝါးနှင့် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာများ ပေါ်ပေါက်လာသလို မနုဿဗေဒဘာသာရပ် အတွက်လည်း Molecular Biology၏အခန်းကဏ္ဍမှာများစွာအရေးပါ လှသည်။DNAတိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးမှုသည် တရားစီရင်ရေးစနစ် ၏ မရှိမဖြစ်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်လာပြီး ဂေဟဗေဒEcologyကဲ့သို့သောဘာသာရပ်ခွဲမှ ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှု နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုပြဿနာ များအား အဓိကဖြေရှင်းပေးလျှက် ရှိသည်။
5.1. ဇီဝဗေဒ၏အခြေခံအုတ်မြစ်များ ဆဲလ်သီအိုရီCell Theory
5.2. ဇီဝဗေဒ၏အခြေခံအုတ်မြစ်များ ဆင့်ကဲပြောင်းလဲခြင်း သီအိုရီ Evolution Theory
5.3. ဇီဝဗေဒ၏အခြေခံအုတ်မြစ်များ မျိုးရိုးဗီဇသီအိုရီGene Theory
သက်ရှိများအားလုံး၏ ဇီဝအချက်အလက်များကို မျိုးရိုးဗီဇတွင်မှတ်သားထားပြီး မျိုးပွားရာတွင် ဥပမာ-မိဘမှသားသမီးသို့ အဆိုပါအချက်အလက်များထည့် သွင်းပေးလိုက်သည်။ DNAသည် မျိုးရိုးဗီဇ အချက်အလက်များ တည်ဆောက်ရာတွင် အသုံးပြုသည့်ကုဒ်လေးများ ဖြစ်သည်။ ထိုအချက်အလက်များသည် Genotypeစနစ်မှ မြင်တွေ့သိမြင်နိုင်သော Phenotypeစနစ် အရွယ်အစား၊ အရောင်အသွေး၊ အမူအကျင့်စသည်တို့ သို့ဘာသာပြန်ခြင်းခံရသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်၏ သက်ရောက်မှုကြောင့် အထက်ပါအချက်အလက်များ ပြောင်းလဲနိုင်သော်လည်း နောက်မျိုးဆက်သို့လက်ဆင့်မကမ်းနိုင်။ Mutationကြောင့် ပြောင်းလဲသွားမှ သာလျှင် လက်ဆင့်ကမ်းနိုင်သည်။
5.4. ဇီဝဗေဒ၏အခြေခံအုတ်မြစ်များ ကိုယ်တွင်းအားမျှခြေစနစ် Homeostasis
6. သက်ရှိများအား ယေဘုယျအုပ်စု ဖွဲ့ခွဲခြားခြင်း
6.1. သက်ရှိများအား ယေဘုယျအုပ်စု ဖွဲ့ခွဲခြားခြင်း ဒိုမိန်း ၃ခု စနစ်
ဒိုမိန်း ၃ခု စနစ်အား ဘက်တီးရီးယား Bacteria၊ အာခီးရား Archaea နှင့် အျူကားရား Eukaryaတို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပြီး ၁၉၉ဝခုနှစ်တွင် အမေရိကန် ဇီဝပညာရှင် Carl Woese မှ စတင် မိတ်ဆက်သည်။
6.2. သက်ရှိများအား ယေဘုယျအုပ်စု ဖွဲ့ခွဲခြားခြင်း ဘက်တီးရီးယား Bacteria ဒိုမိန်း
6.3. သက်ရှိများအား ယေဘုယျအုပ်စု ဖွဲ့ခွဲခြားခြင်း အာခီးရားArchaea ဒိုမိန်း
6.4. သက်ရှိများအား ယေဘုယျအုပ်စု ဖွဲ့ခွဲခြားခြင်း အျူကားရားEukarya ဒိုမိန်း
ပိုမိုကြီးမား၍ ရှုပ်ထွေးသော Eukaryotic ဆဲလ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပြီး ထိုဆဲလ်များအတွင်းတွင် နျူကလီးယပ် Nucleus ပါဝင်သည်။ ကွဲပြားခြားနားသော Eukaryotic ဆဲလ်များပေါ်မူတည်၍ အျူကားရားဒိုမိန်းအား နိုင်ငံ၄ခု ထပ်မံခွဲခြားထားပြန်သည်။ ၎င်းတို့မှာ ပရိုတစ်တာKingdom Protista၊ အပင်Kingdom Plantae၊ မှိုKingdom Fungiနှင့် တိရစ္ဆာန်Kingdom Animalia တို့ဖြစ်ကြသည်။
6.5. သက်ရှိများအား ယေဘုယျအုပ်စု ဖွဲ့ခွဲခြားခြင်း ပရိုတစ်တာလောကKingdom Protista
ပရိုတစ်တာများသည် လွန်စွာသေးငယ်သည့် microorganisms အျူကားရားများဖြစ်ကြပြီး အများစုမှာဆဲလ်တစ်မျိုးဖြင့်သာ ဖွဲ့စည်းထားသည်။ သို့သော် ဆဲလ်အမြောက်အမြားဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် ပရိုတစ်တာများလည်းရှိသည်။ ယင်းတို့၏ ရိုးရှင်းသော ဆဲလ်တည်ဆောက်ပုံပေါ်မူတည်၍ အခြားသော အျူကားယားများဖြစ်ကြသည့် အပင်၊ မှို၊ တိရစ္ဆာန်တို့နှင့် ခွဲခြားထားသည်။ ပရိုတစ်တာများသည် ရေရှိသည့် ပတ်ဝန်းကျင်တိုင်းတွင် ပေါက်ဖွားရှင်သန်နိုင်ကြပြီး ဂေဟစနစ်တွင် ဘက်တီးရီးယားများကဲ့သို့ပင် အရေးပါသူများ ဖြစ်ကြသည်။ တိရစ္ဆာန်ကဲ့သို့သော ပရိုတစ်တာအား ပရိုတိုဇွားProtozoa၊ အပင်ကဲ့သို့သော ပရိုတစ်တာအား အယ်လ်ဂျေးAlgae နှင့် မှိုကဲ့သို့သော ပရိုတစ်တာSlime Moldဟူ၍ ခွဲခြားထားသည်။ အချို့သော ပရိုတစ်တာများသည် ကပ်ပါးရောဂါပိုးမွှားများဖြစ်ပြီး ငှက်ဖျားရောဂါ၊ Sleeping sickness အစရှိသည့် ရောဂါအမြောက်အများ ဖြစ်ပွားစေသည်။
6.6. သက်ရှိများအား ယေဘုယျအုပ်စု ဖွဲ့ခွဲခြားခြင်း မှိုလောကKingdom Fungi
6.7. သက်ရှိများအား ယေဘုယျအုပ်စု ဖွဲ့ခွဲခြားခြင်း တိရိစ္ဆာန်လောကKingdom Animalia
အဏုဇီဝဗေဒ Molecular biology
Cytologyဆဲလ်ဗေဒ ဝါ ကလပ်စည်းဗေဒ